ကိုယ့်ဆီကို မလာချင်တဲ့ လူတယောက်ကို အတင်း ဆွဲခေါ်နေရတာ ပင်ပန်းပါတယ် ။ မာန နဲ့ အရှက် သိက္ခာတွေ အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်ပြီး တွယ်ကပ်နေ ရတဲ့ ကိုယ့် အဖြစ်ကိုယ် တခါ တခါ တော်တော်လည်း ရှက်မိတယ် ။ သူ့ကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ […]
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်း ဖတ်ဖူးတာကြာခဲ့ပေမဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ သင်္ခန်းစာလေးပါ…
အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အတိုင်ပင်ခံ – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ သင်သေချာလား။ အမျိုးသား – ဟုတ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ – ကွာရှင်းပြီး ခုမင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်။ အမျိုးသား – […]
သား မွေးတိုင်း မိန်မမြတ် မဟုတ်သလို သမီး မွေးတိုင်းလည်း မိန်းမယုတ် မဟုတ်ပါဘူး…
တချို့က ပြောကြတယ် ဘုန်းကံ မရှိလို့ သမီး မိန်းခလေး မွေးတာတဲ့ကျွန်မ တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးပေတေလေလွင့်ပြီး ဆိုးသွမ်းနေတဲ့သားတွေကို မွေးထားမိတဲ့ မိခင် တွေဆို ငါဟာမိန်းမမြတ်လို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး သား ယောက်ျားလေး မွေးရင် သာသနာဘောင် သွတ်သွင်းခွင့်ရမယ်ဆိုပြီး မြင့်မြတ်တဲ့မိခင်တွေလို့သတ်မှတ်ကြတာပါ။တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ မြင့်မြတ်တယ် မမြင့်မြတ်ဘူးဆိုတာထက် သားယောက်ျားလေး ထက် […]
ငါးထီးနဲ့ရထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပြီဟု အတိအလင်းကြေငြာထားသူ ရုပ်သံ
“၈ တန်းကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား
“၈ တန်းကျောင်းသားအချင်းချင်း ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား😫😫” ….. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်မြို့ အ.ထ.က(၄)ကျောင်း ၈တန်း(b)တွင် တက်ရောက်နေသောကျောင်းသားဖြစ်သော မောင်ခန့်စည်သူ အသက်(၁၅)နှစ်သည် ၁၇.၇.၁၉ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် ကျောင်းတက်နေစဉ် ကျောင်းအိမ်သာသွားပြီးအပြန်၈တန်း(c)အခန်းအား လှည့်ကြည့်ခဲ့ကာ မိမိအတန်း(b)သို့ ပြန်လာပြီး ထိုင်နေစဉ် (c)အခန်းမှ မောင်မြင့်မြတ်သူ(၁၆)နှစ်မှ လိုက်လာပြီး […]
သင့်ချစ်သူမှာ ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင် လက်လွှတ်လိုက်သင့်ပါပြီ ..
မိန်းကလေးအများစုဟာ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ မာယာတွေနဲ့ လှည့်ကွက်တွေကို ချစ်လွန်းတဲ့စိတ်ကြောင့် မမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ တစ်ခါတလေကျပြန်တော့လည်း ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမှန်း၊ မချစ်မှန်းသိပေမယ့် တစ်နေ့ကောင်းလာနိုးနဲ့ တွယ်ကပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာပိုကောင်းပါမယ်နော်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သင်ဘယ်တော့မှ ပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်လို့ပါ (၁) ဂရုမစိုက်တဲ့သူ သင့်ချစ်သူဟာ သင်ပြောတဲ့စကားတွေ၊ သင်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး၊ အပိုတွေလာပြောနေတယ်၊ […]
ဘာစီးပွားလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်နေတာပဲ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်
ဘာစီးပွားလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်နေတာပဲ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဖယောင်းတိုင် ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ဆင့်၍ထွန်းရသော ယတြာဆန်း တစ်မျိုးတစ်နေ့တွင် ရွှေဘုံသာလမ်း၌ ကျင်လည်ကျက်စားနေသော ရတနာပွဲစား မညိုဆိုသူရောက် လာလေ၏။ ၎င်းင်းမညိုသည် ကျွန်ုပ်နှင့် တွေ့လျှင်တွေ့ချင်း “ဆရာရယ် ဒီတစ်လလုံး မညိုအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အရင်ကဆို ညိုက ၀ယ်လက် […]
အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိတဲ့တိုင် နေ့တိုင်း အင်္ကျီဆင်တူပဲ ဝတ်ကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက စုံတွဲ
အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိတဲ့တိုင် နေ့တိုင်း အင်္ကျီဆင်တူပဲ ဝတ်ကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက စုံတွဲ ဂျပန်နိုင်ငံက Tsuyoshi နဲ့ Tomi Seki ဆိုတဲ့ အဖိုးအဖွား စုံတွဲဟာ အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိပါပြီ။ သူတို့က bonpon511 ဆိုတဲ့ အင်စတာဂရမ် အကောင့်ကို အတူတူအသုံးပြုကြပါတယ်။ […]
ကိုယ့်ဖက်ကချည်း ချစ်နေရလို့ ပင်ပန်းလွန်းနေပြီဆိုရင် အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်သွားမယ့် အဆင့် (8) ခု
တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဆိုတာ တကယ်ကိုနာကျင်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဖက်က စချစ်ရတာ ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့်ကိုယ်ချစ်သလို သူကလုံးဝပြန်မချစ်လာတဲ့အခါ၊ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်မှာမဟုတ်မှန်း သေချာနေတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်ဖို့သာ ရွေးချယ်ရတော့မှာပါနော်။ ကိုယ့်ဖက်ကချည်း ချစ်နေရလို့ ပင်ပန်းလွန်းနေပြီဆိုရင် အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေက သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်. (၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို အတင်းလုပ်ယူလို့မှမရပဲ။ သင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို၊ […]
” ကြည့်ရှု့သူ (၃)သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေး ဗီဒီယို “ …..
” ကြည့်ရှု့သူ (၃)သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေး ဗီဒီယို “ ….. ကျောင်းကပွဲတစ်ခုရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ ရုပ်သံတစ်ခုကြောင့် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို မိဘကျေးဇူးသိတတ်သူတစ်ယောက်ပါ…..။ အနုပညာလောကမှာ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ လက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးထောက်ခံမှု ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်…. ။ ဖြူဖြူထွေးဟာ […]